Turkigu ka war-wareegi maayo inuu la dagaalamo Khaliifa Xaftar: Rajab Erduqaan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Turkigu ka war-wareegi maayo inuu la dagaalamo Khaliifa Xaftar: Rajab Erduqaan
Madaxweynaha Turkiga oo si caadiya ugu dhex badaashay dhiiga ka socda Liibiya ayaa ku faanaya inuu la dagaalami doono jeneraal Khaliifa Xaftar oo u dhow inuu caasimada ka saaro xulafada akhwaanka ee ay isku urur diimeed yihiin Rajab Erduqaan.
Hanjabaadan ayaa imaanaysa xilli kulan labada dhinac ee Liibiya ku lahaayeen Ruushka aanu welli sidii la rtabay u hirgelin. Kulanka ayaa fashilmey kadib markii heshiiska lagu dari waayay in maleeshiyada daabacsan Siraaji ee caasimada joogta hubka dhigis lagu sameeyo.
Khaliifa Xaftar oo ay taageersan yihiin dawladaha diidan akhwaan Muslimiinta ee la dhacsan argagixisada daacish sida Sucuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo ay wataan ayaa lacago badan ugu deeqay Khaliifa si kulanka u fashilmo.
Dayib Erduqaan ayaa aad loogu cambaareeyay dhiiga Musliminta ee uu ku daadinayo Liibiya asagoo hore u daadiyay dhiiga Suuriya.